VAVOLOMBELON'NY TOMPO NY IRANY | FJKM Amboniloha
Ho aminao hatrany anie ny fahasoavan’ny Tompo.
Fomban’Andriamanitra ny maniraka olona hampitondrainy ny hafatra izay tiany hampitaina amin’ny olony : mampahafantatra ny sitrapony amin’ny olona, manoro ny olona ny amin’izay fanapahankevitra tokony horaisiny na izay lalana tokony halehany (1Sam.23, 2.4). Tsy mora anefa ny mampita io hafatr’Andriamanitra io ka tena mila fahasahiana tokoa. Sa ahoana hoy ianao ? Indraindray mantsy dia mety tsy mahafaly ny olona izay anirahana anao ny hafatra asain’Andriamanitra ampitaina ka na tsy henoiny na heveriny akory izay lazainao, na tena lasa enjehiny ianao na mifofo ny ainao mihitsy aza izy. Izany indrindra no mahatonga ny olona izay irahina matahotra ka misalasala na mandà tsy mety mijoro ho vavolombelon’ny Tompo. « Mamy ny miaina » ka dia aleon’ny olona mangina tsy miteny toa izay mitaona ny olona hiala amin’ny ratsy fanaony ka hiverina amin’ny fanompoana an’Andriamanitra. Toa mafy amin’ny Kristiana manatanteraka izay nambaran’i Petera Apostoly « Andriamanitra no tokony hekena mihoatra noho ny olona.» (Asa.5, 29)
Tsarovy anefa ity vavaka nataon’i Jesoa Kristy, Ilay Zanak’Andriamanitra nirahiny hanaisotra ny fahotan’izao tontolo izao ity : «Tahaka ny nanirahanao Ahy ho amin’izao tontolo izao no nanirahako azy kosa ho amin’izao tontolo izao. » (Jao.17, 18) Eto amin’izao tontolo izao no anirahana anao Izao tontolo izao mety ho « madi-po », « mafy handrina », « mety hihaino mety tsy hihaino » anao. (Eze.2, 5.7). Halan’ny olona izay tsy nino Azy Jesoa Kristy. Aza atao mahagaga raha mety ho halan’ny olona koa ianao noho ny amin’ny Tompo. Tanteraho tsara hatramin’ny farany ny iraka ampanaovin’Andriamanitra anao na dia tsy maintsy iaretanao ny mafy aza. Noho ny fitiavan’Andriamanitra anao no nanomezany anao an’i Jesoa Kristy izay nahafoy ny ainy ho fanavotana anao. Koa irahiny ianao ankehitriny hijoro ho vavolombelon’ny fitiavany. Mila anao ny Tompo, torio ny famonjena vitan’i Jesoa Kristy ho an’izao tontolo izao : amin’ny tanora namanao. mpiara-mianatra, mpiara-miasa, mpiara-monina, eny amin’ny fianakavianao, raiamandreny, zoky, zandry…Tandremo sao lasa vavolombelon’izao tontolo izao indray ianao na ho vavolombelon’i Satàna eto amin’izay tontolo izao fa aoka ho vavolombelon’ny Tompo marina.
MAHEREZA E AZA MATAHOTRA MOMBA ANAO JESOA.
AOKA HO VAVOLOMBELONA.
HO AZY IRERY NY VONINAHITRA.
Catégories :	Editorial, Vaovao	/ par AnjGab 12 juillet 2017